March 2008 ~ Test
Monday, March 31, 2008 software, Zoom Feature 1 comment
အလည်လာသူများ အတွက် အသုံး တည့်မယ် ထင်တဲ့Free Antivirus-software လေးတခုပါ.......၊
လောလောဆယ် software မဝယ်ချင် သေးတဲ့...Kaspersky တို့ Norton တို့ကpasswordတွေတောင်းလို့ ဒုက္ခရောက်နေ သူတွေ ကို ဒါလေး သုံးကြည့် ဖို့ညွှန်းချင် ပါတယ်...၊
ဖရီး ဆော့ဖ်ဝဲ လေးပါ ဒါပေမယ့် အတော် လေး ကောင်းလို့ ကျွန်တော် တို့ဆီက လူတွေ အတော် များများသုံးကြတာ တွေ့ လို့ ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်....၊
Sunday, March 30, 2008 Comdey, Zoom Feature6comments
ဒီနေ့ တခြား ဥရောပ နိုင်ငံ တွေတော့ မသိဘူး ကျွန်တော် တို့ ဆီမှာ တော့ နွေရာသီ အချိန် summer time ကိုပြောင်းပြီ ခင်ဗျ....ရှင်းအောင် ပြောရ ရင်တော့ ပုံမှန် ည ၂ နာရီ ဖြစ်ရ မှာကို ဒီနေ့ည ၂နာရီမှာ ည ၃နာရီ အဖြစ် ပြောင်းလိုက် တာပါ...အဲဒီတော့ ၁နာရီ လျှော့အိပ် ရတော့မှာပေါ့လေ.....
ဒီတော့ ကျွန်တော် သွားသတိ ရလိုက် မိတာက ဟိုး လွန်ခဲ့သော ၉ နှစ်ခန့် က အဖြစ် အပျက် လေး တခုပါ....ထိုအချိန်က ကျွန်တော် သင်္ဘော လိုက်နေ ချိန် တနေ့သင်္ဘော ပေါ်ကို ကဒက် လေးတယောက် တက်လာတယ်...(ကဒက် ဆိုတာ အလုပ်သင် အရာရှိ လောင်းလေး ပေါ့)....ဒါနဲ့ကုန်တွေ တင် အပြီး မှာ သင်္ဘောဟာ ဆိပ်ကမ်း ကနေ ထွက်ခွာ လာခဲ့ ပါတယ်......။
ထွက်ခွာ လာပြီး ၂ရက် နေတော့ Time Zone ကွာခြား ချက်များ အရ အစ တွင် ကျွန်တော် ဆိုခဲ့ သလို အချိန်ပြောင်း ဖို့ဖြစ်လာ ပါတယ်.....ဒီတော့ အခုမှ သင်္ဘော ပေါ် ရောက်လာတဲ့ ကဒက် လေးကမေးပါတယ်.......
ဘာလို့ အချိန် ပြောင်းရတာလဲပေါ့....ဒီတော့ ဝါရင့် သင်္ဘောသား AB တွေ Bosun တွေက ကမ္ဘာကြီး ကို ဂရင်းဝှစ်
မျဉ်း တွေနဲ့ ပိုင်းခြား ထားကြောင်း ဒါကြောင့် တနိုင်ငံ နဲ့တနိုင်ငံ အချိန်တွေ မတူဘဲ ကွာခြား ကြကြောင်း အစရှိ
သဖြင့် ရှင်းပြကြ ပါတယ်..။
ဒါကို ကြားသွားတဲ့ Chif Officer ကျွန်တော် တို့ သင်္ဘောသားတွေ အခေါ် ချီးဗူး ကဝင်ပြီး ပြောပါတယ်.....(ကျွန်တော်တို့ချီးဗူး က အလွန် ချောက်တွန်း တာ ဝါသနာ ပါ ပြီး ပျော်တတ် ပါတယ်)......
ဟေ့ ကဒက် မင်းဒါတောင် မသိပဲ ဘယ်လို အလုပ်သင်အရာရှိ ဖြစ်လာ တာလဲ....ဒီနေ့ ည ၂နာရီ ဂရင်းဝှစ် မျဉ်းကို ဖြတ်မယ် မတွေ့ ဖူး ရင် ကြည့်ထား လို့ ပြောလိုက် ပါတယ်....။
နောက်နေ့ချီးဗူး ဂျူတီ ပြီးလို့မနက်စာ စားဖို့ ဆင်းလာ တော့ ကဒက်လေး ကို တွေ့ ချိန်မှာ မေးပါတယ်.......
ကောင်လေး မနေ့ က ငါပြောတာ တွေ့ လား ....?
ကဒက် လေးကလဲ ရင်ကော့ ပြီး ဖြေလိုက် တာက ...ဟုတ်ကဲ့ ချိဖ် ကျွန်တော် မနေ့ ည က စောင့်ပြီး ကြည့်တာ...
ည ၂နာရီ ရောက်တဲ့ အချိန် ဂရင်းဝှစ် မျဉ်း ကိုဖြတ်တာ တွေ့ ပါတယ်......အစိမ်း ရောင် မျဉ်းကြီး မှ တောက်လျှောက် အကျယ်က အိမ်တလုံး စာလောက်ရှိပြီး အစ နဲ့အဆုံး တောင် မမြင်ရဘူး ..........ဟူသတတ်..
ကျွန်တော် ထင်တာတော့ ဂရင်းဝှစ် မျဉ်း ဆိုတော့ အစိမ်းရောင် မျဉ်း ဖြစ်မယ် ဆိုပြီး ကောင်လေး ကြောက်ကြောက် နဲ့ ရမ်းတုတ် လိုက်ပုံ ပါ......။
Saturday, March 29, 2008 Essay, Zoom Feature3comments
သူများ အကြောင်း တွေ ပြောရတာ အားမရလို့ ကိုယ့်ပေါင် လေးလည်း ကိုယ် ပြန်လှန် ထောင်းလိုက် အုံးမယ်.....။
ဖြစ်ပုံ က ဒီလို ဗျ....။
ကျွန်တော် အခု ရောက်ရှိ နေထိုင် နေတဲ့ မြို့လေး ကို ရောက်လာ ခါစ ပေါ့ဗျာ၊
ဒီမြို့လေး ဟာ ခရီးသွား လုပ်ငန်း နဲ့ အသက် မွေးတဲ့ မြို့ကလေး ပီပီ နွေရာသီ ရောက်တာနဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်း ဖွင့်ပွဲကို အကြီးအကျယ် ကျင်းပလေ့ ရှိ ပါတယ်....
ကျွန်တော် နေထိုင် တဲ့ အိမ်မှာ အိမ်နီး ချင်း ဂျာမန် ညီအမ လှလှ လေး ၂ ယောက်လည်း ရှိတယ် ဆိုပါတော့ ဗျာ....သူတို့ ၂ ယောက် ဟာ မျက်နှာထား အလွန် တည်တယ် လို့ လည်း အိမ်မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ ရပ်ကွက် မှာ သတင်းကြီးပါတယ်.....
ဒီလို နဲ့ မြို့ရဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်း ဖွင့်ပွဲနေ့ညဘက် မှာ တခြား မြို့က နေ လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်း ကို ဧည့်သည် ကြိုဆိုပွဲ လုပ်ရာ မြို့ အနီး က မြစ်ဆိပ် ကို လိုက်ပြ ပါတယ်...သူတို့ အခမ်းအနား ကျင်းပ ပုံက ဒီလိုဗျ....ဧည့်သည် တွေ လိုက်ပါလာ တဲ့ သင်္ဘောတွေ မြစ်ကြောင်း ထဲ ဝင်လာချိန်မှာ မြစ်ရဲ့ ဟိုဘက်ကမ်း ဒီဘက်ကမ်း ကနေ မီးရှုးမီးပန်း တွေ ဖောက် အမြောက် တွေ ဖောက် ပြီး ကြိုဆိုတာ...
ကျွန်တော် တို့၂ ယောက် အဲဒီ နေရာ ကို ရောက်ရှိ ချိန်မှာ အိမ်နီး ချင်း ညီအမ နှစ်ဖော် လဲ အဲဒီ မှာ ရှိနေတယ်...ကျွန်တော် တို့လဲ ကိုရွှေ တို့ ထုံးစံ အတိုင်း တယောက် နဲ့ တယောက် ပခုံး လေး ဖက်ပြီး ကောင်မလေး နှစ်ယောက် ကို ကြည့် အဲလေ ယောင်လို့မီးရှုး မီးပန်း တွေ ကြည့်နေ ကြတယ်...မကြာပါဘူး အငယ်မလေး ကနောက် လှည့်ကြည့် တော့ ကျွန်တော် တို့ ကို မြင်တော့ ချက်ခြင်း ပြုံးသွားတယ်..ပြီးတော့ သူ့ အမ နားကပ် ပြီးပြောလိုက် တော့ သူ့ အမ လဲ လှည့်ကြည့် ပြီး ပြုံးပြန် ပါတယ်....
ကျွန်တော် တို့ ရင်ထဲ ဝင်ကြည့် လိုက်စမ်း ပါဗျာ....ဒီလောက် မျက်နှာ တည်တဲ့ ညီအမ ၂ယောက် ပြုံးပြ တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လို ခံစား ရမလဲ ဆိုတာကို....အိမ်အပြန် လမ်း တောက်လျှောက် လဲ သူတို့ နောက်က သူငယ်ချင်း ၂ယောက်သား ပခုံးဖက် ပြီး ကောင်မလေး၂ယောက် ကလှည့်ကြည့် ပြီးပြုံးလိုက် ကိုယ်ကလဲ ပြန်ပြုံး ပြလိုက် နဲ့ ခြေထောက် နဲ့ မြေကြီး ထိတယ် တောင်မထင် တော့ဘူး.....နောက်နေ့တွေလဲ ဒီလို ပါဘဲ..ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ပြန်သွား ပေမယ့် ညီအမ ၂ယောက်ကတော့ ပြုံးပြနေဆဲပါပဲ....ကျွန်တော် လဲ သွက်သွက် လက်လက် နဲ့ အငယ် မလေး ကိုပဲ ရွေး ရင်ကောင်းမလား..?..အိနြေ္ဒ လေးနဲ့ အကြီး မလေးကိုပဲရွေးရင်ကောင်းမလား...?..တယောက် ကို ရွေးလိုက် ပြန်ရင် လဲ ကျန်တဲ့ တယောက် ခမျာစိတ် မကောင်း ဖြစ်သွား မှာပဲ ဆိုပြီး တယောက် ထဲ လေထဲ မှာ တိုက်အိမ် ဆောက်နေ တာပေါ့ ဗျာ....
မကြာ ပါဘူး တနေ့ တော့ ဆက်လက် သည်းခံ နိုင်စွမ်း ရှိဟန် မတူတော့ တဲ့ အငယ် မလေး ကျွန်တော် တယောက် ထဲအိမ်ရှေ့ ပန်းခြံ ထဲ ထိုင်နေ တုန်း ကျွန်တော့် ရှေ့က ခုံလေး မှာ စွေ့ ကနဲ ဝင်ထိုင် လိုက်ရင်း
နင့် ရည်းစား ဘယ်ရောက် သွားလဲ.....?
ကျွန်တော် ကြောင်သွား တယ်...ဒီမှာ ရောက်ကာ စ ဘယ်နား သွား ရည်းစား က ရှိမှာ တုန်း...
အခု မှ သူတို့ညီအမ နှစ်ယောက် ထဲ က ဘယ်သူ့ ရွေးရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတုန်းဟာကို...
ကောင်မလေး တော့ နောက်ပြီ ဆိုပြီး......
ငါ့မှာ ရည်းစား မရှိသေး ဘူး ငါကြိုက် တာတော့ တွေ့ ထားတယ်..ဆိုပြီး စွတ်တင် တော့တာပေါ့....
အဲဒီမှာ ကောင်မလေး ပြန်ပြော လိုက်တာ ကြောင့် လူ့ မှာ နထင် နရင်း တွေ ကြီးပြီး ဆံပင် မွှေးတွေ ပါ ထောင်သွား ရပါ တော့တယ်....။
"အောင်မာ....ဟို ခရီးသွား ဖွင့်ပွဲ နေ့ က တွေ့ ပါတယ်နော်....၂ ယောက်သား ပခုံးချင်း ဖက်ပြီး ပြုံးလို့ရွှင်လို့ "
သေပါ ပြီ အရပ် ကတို့ ရေ ကျွန်တော် တို့သူငယ်ချင်း တွေ ကိုယ့်နိုင်ငံ မှာ သွားသလို ပခုံးချင်း ဖက်ပြီး သွားမိတာ.....ဒီမှာ..အနောက် နိုင်ငံ တွေမှာ က လိင်တူ ဆက်ဆံ သူ ခြင်းသာ ကျား၊ကျား ခြင်း မ၊မ ခြင်း ပခုံးဖက်သွားလေ့ ရှိကြောင်း နောက်ပိုင်း မှ သိလိုက် ရလို့ .....နောက်ပိုင်း မြန်မာ လောက မှာ ဘယ်တော့ မှ ဘယ်သူမှ ပခုံး မဖက် ရဲကြ တော့ပါ......ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် တို့၂ ယောက် ကတော့ ရှာဖွေ တွေ့ ရှိ သူများ အဖြစ်မှတ် တမ်း အတင် ခံ လိုက်ရ ပါပြီ..........။
PS:ဖတ်ပြီး လျှင် မေးမြန်း စုံစမ်း ခြင်း သီးခံပါ.....။ရှက်လို့ 
တော်လှန်ရေးနေ့ ၏ ဗိသုကာ
Thursday, March 27, 2008 Feeling, Zoom Feature3comments
တပ်မတော်,တော်လှန်ရေး နေ့ နှင့် လွပ်လပ်ရေး ၏ အစစ် အမှန် ဗိသုကာ.....။
သမိုင်း ပျောက်အောင်ဘယ်လိုဖျောက်ဖျောက်သမိုင်း မပျောက်နိုင်ပါ....။
Wednesday, March 26, 2008 Comdey, Zoom Feature4comments
အလုပ် က အပြန် အိမ်မှာ အေးဆေး နှပ်နေတုန်း တယ်လီဖုန်း မြည်သံ ကြောင့် စည်းစိမ် လေးပျက် သွားတယ်.
ဟယ်လို....မင်းသိမ်း စကားပြော နေပါတယ်၊
ရယ်သံ နှင့် တဆက် ထဲ လိုက်ပါ လာတဲ့ မေးခွန်း ကြောင့် ဘယ်သူ လဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် သိလိုက် ပါပြီ...၊ဒါနဲ့စကား လေး ဘာလေး ပြောပြီး ဖုန်းပြန် ချလိုက် အပြီး မှာ ကျွန်တော့ စိတ်တွေ လွန်ခဲ့ သော နှစ် ၂၀ ကိုပြန်လည် ရောက်သွား ပါ တော့တယ်.....။
အဲ့ဒီ အချိန် က လူတွေ က ၁၅ နှစ် ၁၆ နှစ်သားတွေ အချစ် ဆိုတာ စူးစမ်း တဲ့ အရွယ်
ခုန ဖုန်းဆက် တဲ့ နိုင်အေး ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း က အလွန် စန်းပွင့် တဲ့ကောင်
သူနဲ့ တွေ့ ရင် သူ့ အတွေ့ အကြုံ တွေ ပြန်လည် ဖောက်သည် ချတိုင်း ဒီကောင်မှာ
ဘယ်လို ကြီး ဖြစ်ဖြစ် သွားမှန်း မသိ ဘူး......။
ပြန်ပြော ရမှာလဲ ရှက်ပါ ရဲ့ဗျာ...သူ ပြောတဲ့ အထဲ မှာ ချစ်သူ နှုတ်ခမ်း ဆို တာ ကျောက်ကျော တုံး လေးနဲ့ အလား သဏ္ဍန် တူဆို ဘဲ....။အဲဒီတော့ အဲ့ဒီ ကျောက်ကျော တုံး ကို တွေ့ ဖူး ချင်လို့အပြင်းအထန် ရှာလိုက်တာ အနည်း ငယ်နီး စပ်လာတယ် ဆို ပါတော့ဗျာ....။
ကျောင်းပိတ် တဲ့ တရက် ကျွန်တော့ ရဲ့ ပစ်မှတ် ကလေး အိမ်ကို သွားလည် တော့ အခန့် သင့်ဘဲ သူလေး ကိုတွေ့ ပါတယ်...သူမ ရဲ့ မိဘ တွေ လည်း အလှုသွား နေကြ တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း သိလိုက် ရချိန် မှာ ကျွန်တော့ ရင်ထဲ မှာ ဘန်ဒါအာချေး မှာလှုပ်သွား တဲ့ ငလျှင် လို တုန်ခါ သွားပြီး ဝမ်းသာ မှု လှိုင်းလုံး တွေကလဲဆူနာမီ ထက်တောင် ပိုနေ မိပါတယ်........။
ဒီနောက် တော့ ကောင်မလေး ကို ဘာမပြော ညာမပြော နဲ့အနား ကပ်သွား ပြီး အကြံ အတိုင်း ရုတ်တရက်
ကျွန်တော် အရမ်း သိချင် နေတဲ့ ကျောက်ကျော တုံး လေးကို လက်တွေ့ ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် ကြီး နမ်းစုပ် လိုက်ချိန်မှာတော့ .............................။
ကျွန်တော် ရုတ်တရက် ချာကနဲ ကောင်မလေး ကို တောင် နှုတ်မဆက် ဘဲ လှည့်ထွက် လာခဲ့တယ်သူလေး ကတော့ နောက်က လိုက်ခေါ် ပါရဲ့........ကျွန်တော် လှည့်မကြည့် ပဲ ခြေဦး တည့်ရာ ထွက်လာမိတယ်.............။
နောက်နေ့ တွေလည်း ကောင်မလေး ....ကျွန်တော် ကပဲ ယောက်ျား တန်မဲ့ ရှက်ကြောက်ပီး ရှောင်နေ တယ် အောက်မေ့ လို့ လာလာ ရှာ ပါတယ်......။
ဒီအကြောင်း နိုင်အေး သိသွား ပြီး ကျွန်တော့် ကို မေးလို့ ဖြစ်ကြောင်း ရယ် ကုန်စင်ကိုနတ်သံနှောပြီးပြောပြလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အဲဒီ အချိန်က တီဗွီ ကြော်ညာ တွေမှာ ခေတ်စား နေတဲ့ ဇီဝက သွားတိုက် ဆေး ကိုဆောင်ထား မင်းသိမ်း လို့ ပြောပြီး နောက်ပိုင်း ဒီကောင်ဖွတာနဲ့ ဇီဝက မင်းသိမ်း ဆိုပြီးသူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ အမည် တွင် သွားရ ပါ တော့တယ်.......။
မိတ်ဆွေ တို့ စဉ်းစား ကြည့်လေ ညက အလှုအိမ် သွား ကူလို့ အိပ်ရာထ နောက်ကျ ပြီး ထလာကာစကောင်မလေး ကို သွားပြီး ကျောက်ကျော တုံး လေး ဆိုပြီး သွားစမ်း မိတဲ့ ကျွန်တော် နှင်းရည် ဆမ်းထားတဲ့ ကျောက်ကျော တုံး မတွေ့ ရပဲ ဘယ်လို ကျောက်ကျော တုံး မျိုး တွေ့ လို့ ထွက်ပြေး တဲ့ ဘဝ ရောက်ရလဲ ဆိုတာ..........။
PS:စင်္ကာပူ ရောက် ငယ်သူငယ် ချင်း မင်းသိမ်း အတွက် ငယ်ဘဝ အမှတ် တယ....။
လူ နှင့် ကျေးဇူး
Wednesday, March 26, 2008 Essay, Zoom Feature3comments
အကုန် လုံးကို တော့ မဆိုလို ပါဘူးဗျာ...တချို့ တွေပါ။
ဒီလိုဗျ ကျွန်တော် မြင်ဖူးတဲ့ ထဲက တယောက် ဆိုပါတော့ ဗျာ၊
သူနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်အတော် ကြာ အလုပ်တွဲ လုပ်ကြပါတယ်...၊
တရက် မှာဗျာ မျက်မှန်းတန်း မိနေတဲ့ လူ တစ်ယောက် က အကူအညီ တောင်းလို့ ကျွန်တော်
ဒါကိုမြင်တဲ့ အခါ အလုပ်တွဲ လုပ်နေတဲ့ လူက ဘာပြောလဲ ဆိုတော့.....
"ခင်ဗျား ဗျာ သူဟာ ခင်ဗျား အပေါ် ကျေးဇူး ခံ ကျေးဇူး စား လဲ ရှိတာ မဟုတ် ဘဲနဲ့အပင်ပန်းခံ လို့ သွား
ကျွန်တော် အတော် လေး စိတ်ထဲ ရွံရှာ သွားမိတယ်...ဘယ်လို လူလဲ ...?
ကျေးဇူးရှိ မှ ကူညီ ကြကြေး ဆိုရင် ဒီကျေးဇူး ကိုဘယ်သူက စပြီး ပြုမှာလဲ...? ဒီလူ့အပေါ်မှာ
ဘာမှ ကျေးဇူး မရှိ ဘဲ ကူညီခဲ့ သူတွေ အပေါ်ရော ဒီလူ ငပေါ တွေလို့ မြင်မှာလား...?
ကျွန်တော် သဘော ပေါက်သွားတယ် ဒီလူဟာ သူ့အပေါ် ကျေးဇူး ရှိခဲ့ ရင် မလွှဲသာ လို့အကြွေးဆပ် သလို ပြန်ကူ ညီမယ်....ကျေးဇူး မရှိ တဲ့သူကို ကူညီတယ် ဆိုတာ လဲ သူ့ အတွက် အခွင့် အရေး တွေ ရနိုင်လို့ သာ
အကျိုး မျှော်ပြီး ကူညီ တတ်သူ ဆိုတာ ကိုပေါ့.....
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် လဲ သူနဲ့အလုပ် ဆက်မလုပ် ဘဲ ကျောခိုင်း လိုက်ပါတယ်......
မိတ်ဆွေ တို့ ရော ကျေးဇူး ရှိ မှ လူတွေ ကို ကူညီမှာလား...ဒါမှ မဟုတ်..........................................။
ယုန်ကလေး ရဲ့ပုံပြင်
Sunday, March 23, 2008 Essay, Zoom Feature3comments
အခု အချိန်ဟာ အနောက် နိုင်ငံ များ အတွက် မြန်မာ လို အခေါ် အဝေါ် အရ အီစတာ ပွဲတော်ရက် ဖြစ်ပါတယ်.......။
ကျွန်တော် ရောက်ရှိ နေတဲ့ နိုင်ငံ မှာ ဒီရက် တွေ အတွင်း အိမ်တွေ ဆိုင်တွေ မှာ ယုန်ရုပ် လေးတွေ ဆေး ချယ် ထား တဲ့ ကြက်ဥ တွေကို နေရာ အနှံ့ ဆိုသလို တွေ့ မြင် ရပါတယ်............။
ုယုန်ရုပ် လေးတွေ တွေ့ တဲ့ အခါ ကျွန်တော် တို့ဒီရောက် တော့ စကား ပြော သင်တန်း တက်တဲ့ အခါ ကျောင်းက ဆရာ ပြောပြတဲ့ ပုံပြင်လေး ကို သတိရ မိလို့ ပြန်လည် ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်.......။
မြန်မာ လို ပုံစ ပြောမယ်ဆိုရင် တော့ ဟိုး......ရှေးရှေး တုန်းကပေါ့ဗျာ............
ယုန်ကလေး တကောင်ဟာ နေမကောင်း တာနဲ့ဆေးဆိုင် ကိုလာ ပြီး ဆေးဝယ် ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်......။
ဒီ အခါမှာ ဆေးဆိုင် ပိုင်ရှင် က ယုန်ကလေး ဒီဆိုင်ဟာ လူတွေ အတွက် ဆေးပဲ ရှိတယ် ယုန်တွေ အတွက် ဆေး မရှိဘူး....မင်းအတွက် ဆိုရင် တော့ ဟို ဘက်လမ်း က ဆေးဆိုင် ကို သွားပါ ဆိုပြီး ညွှန်လိုက် တယ်.......။
ဒါပေမယ့်လည်း နောက်နေ့မှာ ယုန်ကလေး ဟာ ထပ်ပြီး ရောက်လာပြန်တယ်........ဒီ နေ့ မှာ တော့ ဆေးဆိုင် ပိုင်ရှင် ဟာ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလို့အတော် ဒေါသ ထွက်ပြီး ယုန်ကလေး ကို ပြောလိုက် တာက ဟေ့ မင်းအတွက် ဆေးက ဟိုဘက် လမ်းက ဆေးဆိုင် မှာ နောက်တခါ မင်းလာရင် နံရံ ပေါ်မှာ သံနဲ့အရိုက် ခံရမယ် ဆိုပြီး ကြိမ်းမောင်း လွှတ်လိုက် ပါတယ်.....။
နောက်နေ့မှာလည်း အမှတ် မရှိတဲ့ ယုန်ကလေး ဟာ ဆေးဆိုင်ကို ထပ်ရောက်လာ ပြန်ပါတယ်........ယုန်ကလေး က ကျွန်တော် နေမကောင်းလို့ဆေးလိုချင် ပါတယ် လို့ ပြောလို့ တောင် မဆုံးသေး ဘူး အလွန် ဒေါသ ထွက်နေ တဲ့ ဆေးဆိုင် ပိုင်ရှင် ဟာ ယုန်ကလေး ကို မွှေ့ ယမ်း လိုက်တာ ယုန်ကလေး သတိလစ် သွား ပါတယ်....ယုန်ကလေး သတိ ပြန်ရလာ တော့ သူ့ ကို ဆေးဆိုင် ပိုင်ရှင် ဟာ ပြောတဲ့ အတိုင်း နံရံ မှာ လက်နှစ် ဖက်ကို သံရိုက် ပြီး ချိတ်ထား မှန်း သိလိုက် ရပါတယ်...... ။
ဒါနဲ့ယုန်ကလေး ဟာ အကူအညီ ရလို ရညား ဘေးဘီ ကို ကြည့်လိုက် တဲ့ အခါ သူ့ လိုဘဲ နံရံ ထက်မှာ အချိတ် ခံထား ရသူ တယောက် ကို တွေ့ လိုက် ရလို့လှမ်းပြော လိုက်သတဲ့ .......သြော်....မိတ်ဆွေ ကြီးလဲ ကျွန်တော့် လိုဘဲ ဒီဆိုင် မှာ မရှိတဲ့ ဆေးကို လာမေး မိတယ် နဲ့တူပါရဲ့ ဒီ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဟာ အတော် ရက်စက်တယ်ဗျာ..........။
အချုပ် ကိုဆိုရရင် အဓိက ကတော့ ယုန်ကလေး စကား လှမ်းပြောလိုက် တဲ့ ယုန်ကလေး လိုဘဲ နံရံ ပေါ် လက်နှစ် ဘက် သံ အရိုက် ခံ ထားရတာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ဒီ ပုံပြင်ရဲ့ အဓိက ပဟေဠိ ဖြစ်ပါတယ်........။
မိတ်ဆွေ တို့ လဲ ဒီ ပုံပြင် လေး ကိုဖတ်ရှု ပြီး ဒီလူ ဘယ်သူ ဆိုတာ စဉ်းစား ကြည့်ကြ ပါနော်..........။
အတော် ကြာပေလို့ 
Sunday, March 23, 2008 Comdey, Zoom Feature2comments
ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း နောက်တယောက် အကြောင်းပြောပြ အုံးမယ်..........။
သူလဲ လူပျိုကြီး ပဲဗျ သူ့ မှာ အမှီအခို ရှာချင်သူ အမျိုးသမီး လေးတွေ မှီခိုအားထား လောက်ချင် စရာ ကျောထောက် နောက်ခံ ရှိပါရက်နဲ့ ဘဝ ပေး ကုသိုလ်ကံ ကြောင့် အမျိုးသမီး လေးတွေ ညအိပ် တဲ့အခါ အိပ်မပျော် သော ညတွေ အင်္သချေ ဆိုပြီး သီချင်း သီဆို သွားနိုင် လောက်တဲ့ ရုပ်ရည် ကြောင့် ဘယ် မိန်းကလေးကမှ ဖဲမွေ့ ရာ ထက်မှာ တူယှဉ်တွဲ ပြီးချစ်ခြင်း မပြိုင်လို ကြဘူး........။
ဒီတော့လဲ သူ့ ခမျာ ငါ့ဝမ်း ပူဆာ မနေသာ ဆိုသလိုဘဲ လက်လီ လက်ကား ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား ရာနေရာ များမှာ ပဲ သူ့ ဆန္ဒ တွေကို ဖြည့်ဆည်း ရင်း သူ့ ဘဝ ကိုရေစုန် မျောလိုက်ပါတယ်.......။
တနေ့ မှာပေါ့ဗျာ........ကျွန်တော် တို့သူငယ်ချင်း တသိုက် လ္ဘက်ရည်ဆိုင် မှာ ထိုင်နေတုန်း ဆိုင်ရှေ့ က ဘက်စ်ကား ဂိတ်မှာ ဘက်စ်ကား ပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ သူ့ ကို တွေ့ လိုက်ရပါတယ်....သူကလဲ ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ လို့ သက်ပြင်းပူ ကြီးကို မှုတ်ထုတ်ရင်း လွတ်တဲ့ ထိုင်ခုံ မှာ ဝင်ထိုင် လိုက်ပါတယ်........။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ လည်း သူစီးလာတဲ့ ဘက်စ်ကား နံပါတ်နဲ့လာရာ လမ်းကြောင်းအရ သူသွားနေကြ လက်လီ အိမ်က ပြန်လာတယ် ထင်လို့မေးကြည့် လိုက်ပါတယ်.......ဟေ့.......ယောက်ဖ (မကြီး)တို့အိမ်က ပြန်လာတာ လား......?အဲဒီမှာ သူ့ အဖြေ စကားကြောင့် ကျွန်တော် တို့တအုပ်စုလုံး ဘာပြော ရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်သွား ကြရ တော့တယ်.......။
သူဖြေလိုက်တာက အေးကွာ ငါလဲ အလုပ် တွေရှုပ် နေလို့မရောက်တာ အတော်ကြာ တာ ၂ ရက်လောက်တောင် ရှိပြီ .......တဲ့လေ.........။
လူပျိုကြီး နဲ့ ခွေးပါရဂူ
Saturday, March 22, 2008 Comdey, Zoom Feature 1 comment
ကျွန်တော့ နာမည် တင်မောင် ခင်မင်ရင်းနှီးသူ များကတော့ ဖက်တီး လို့ ချစ်စနိုး ခေါ်ကြသလို ခွေးပါရဂူ လို့ လည်းခေါ်ကြလေရဲ့ ..။ဒီအမည် တွင်ရတာ ကလဲ ခွေးမှန်ရင် တင်မောင်တို့မသိတဲ့ခွေး မရှိလို့ ပြောရလောက်အောင် လေ့လာထားတယ်လေ..။ကိုယ်တိုင်က ခွေးအရမ်း ချစ်တာကိုး..။
ကမ္ဘာပေါ်က ကြိုက်တဲ့ခွေး အကြောင်းမေး သနားတယ်..၊ဘယ်နိုင်ငံ ကလာတယ်..ဘယ်ရာသီ ဥတုနှစ်သက်တယ် အလေ့အထ ဘယ်လိုရှိတယ်...အိုဗျာကုန်ကုန် ပြောလိုက်မယ် ကြိုက်ရာမေး မသိမရှိစေရ..ဒီလိုနဲ့ မယုံသူတွေ လာမေးပြီး လောင်းကြေး စားကြေး လုပ်တိုင်း တင်မောင်တို့သောက်ပွဲ ကြီး ကျင်းပပြီး အောင်ပွဲခံ အနိုင်ယူ နေကြ...၊ဒါပေမယ့် ဗျာ တနေ့တော့ ဂွကျကျ လူပျိုကြီး စိုင်းသန်းထွန်း နဲ့ တွေ့ မှ ဒုက္ခရောက် တော့တယ်...။
ကျုပ်နာမည် စိုင်းသန်းထွန်း ရှမ်းလူမျိုး ပေါ့ဗျာ..ဒီအချိန်ထိ တကိုယ်ထီးတည်း လူပျိုကြီး ဘဝ ကိုခံယူထားတယ်..မျက်စိရှုပ်၊နားရှုပ်၊စိတ်ရှုပ်..ဘယ်လို အရှုပ်မျိုး မှ သည်းမခံ ချင်လို့လူပျိုကြီး လုပ်နေတယ်..မြင်တာတွေ ပြောမိ ပြန်တော့လည်း လူ့ ခွစာ လို့ အမည်တပ် ကြပြန်ရော...
တနေ့ ပေါ့ဗျာ သူငယ်ချင်းတွေ စုသောက်နေကြတုံး..တင်မောင် ရောက်လာတယ်..ပြီးတော့ ဝိုင်းထဲဝင်ထိုင်ပြီး ထုံးစံ အတိုင်းခွေး နိကာ ချဲ့ ပါတော့တယ်..၊မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်ထဲမှာ မြန်မာပြည် ချောင်းသာ မှာ ကျွန်းခွေး ဆိုပြီး ခွေးမျိုးသစ် ပေါ်နေကြောင်း အလွန်လှကြောင်း သူလဲ ဝယ်ရန် ကြိုးစား နေကြောင်း ခွေးဆိုလျှင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ သူမသိတာ မရှိကြောင်း အစရှိသဖြင့် ပြောနေပါတော့တယ်.
ဒီကောင်ကို အမြင်ကတ်နေတာ ကြာပြီ ဒါနဲ့ကျုပ်လဲ စိတ်ပေါက်ပေါက် ရှိတာနဲ့ ..ဟေ့ တင်မောင် မင်းကိုယ်မင်း ခွေးအကြောင်း အကုန်သိတယ် ထင်မနေနဲ့ ကွ ..မင်းဟာ မြန်မာပြည် ကခွေးတောင် ကုန်စင်အောင် မသိဘဲနဲ့ ...ကျုပ်ဒီလို ပြောလိုက်တယ် ဆိုရင်ဘဲ တင်မောင်က ကိုစိုင်း မြန်မာပြည် ကခွေး၊ချင်းခွေး၊အင်းခွေး၊ကျွန်းခွေး၊ ခင်ဗျား ကြိုက်ရာမေး တဝိုင်းကြေး လို့ လောင်းကြေး ခေါ်ပါတော့တယ် ..။ ဒါနဲ့ကျုပ်လဲ အိုကေ စိန်လိုက် လို့ ပြောပြီး မြန်မာပြည် ထဲကခွေးတစ်မျိုး ကိုမေးလိုက်တယ်.. သူမဖြေနိုင်ဘူးလေ..ဒါနဲ့ ကျုပ်တဝိုင်း သောက်လိုက်ရတယ်..သူလဲ အဲဒီ ခွေးအကြောင်း သိချင် လွန်းလို့ကျုပ်ဆီ လာလာပြီး အရက်တိုက်ပြီး မေးလိုက်ရတာ အမောပဲ ..ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကို တနေ့ ရွှေဥ တစ်လုံး ဥပေး နေတဲ့ ငန်းကိုရိုက်သတ်ပြီး ချက်စားတဲ့ အထဲမှာ စိုင်းသန်းထွန်း မပါဘူးလေ..
ဒီကောင်ကို ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး... ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ကိုတော့ပြောပြပါ့မယ်..ကျုပ်မေးလိုက်တာက.."တင်မောင် မင်းဒီလောက် ခွေးအကြောင်း သိတယ်ဆိုရင် ရှမ်းခွေး ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ?".. ဒီကောင်မဖြေနိုင်ဘူးလေ
ကျုပ်တို့ ရှမ်းပြည် မှာရှိတဲ့ ခွေးတွေဟာ ရှမ်းခွေးပေါ့..... ခင်ဗျား တို့ မို့ လို့ပြောပြတာ ဒီကောင့်ကို တော့သွား မပြောကြ ပါနဲ့ နော်......................။
PS:ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း လူပျိုကြီး စိုင်းသန်းထွန်း ၏ ပြောပြချက်အား ပြန်လည်တင်ပြသည်......။